Shiinaha TY320-3 Soosaaraha Bulldozer iyo Alaab-qeybiye | Xuanhua
TY320-3 cagaf-cagafku waa mid adag oo adag, wareejinta hawo-qaadista, cagaf-cagaf nooca cagaf cagafku hago. Planetary, gudbinta wareejinta awooda taas oo Unilever ay maamusho. Nidaamka hawlgalka ee loogu talagalay iyadoo loo eegayo injineernimada aadanaha iyo mashiinka ayaa ka dhigaysa hawlgal si fudud, waxtar leh oo sax ah.
TY320-3 cagaf-cagafku waa mid adag oo adag, wareejinta hawo-qaadka, cagaf-cagaf nooca cagaf cagafku hago. Planetary, gudbinta wareejinta awooda taas oo Unilever ay maamusho. Nidaamka hawlgalka ee loogu talagalay iyadoo loo eegayo injineernimada aadanaha iyo mashiinka ayaa ka dhigaysa hawlgal si fudud, waxtar leh oo sax ah. Awood xoog leh, qaab ciyaareed aad u fiican, waxtarka hawlgalka sare iyo aragti ballaadhan ayaa muujinaya astaamaha faa'iidooyinka. Ikhtiyaariga ah waxaa ka mid ah U-blade, saddex ripper ripper, ROPS iyo qalab kale. Waa dookhaaga ugufiican dhismaha wadada, dhismaha hydro-korontada, dib u habeynta goobta, dhismaha dekedda, horumarinta miinooyinka iyo dhismooyinka kale.
Miisaanka Hawlgalka (Kg): 34000
Miisaanka hawlgalka (oo leh ripper) (Kg): 38500
Cadaadiska dhulka (oo ay ku jiraan ripper) (KPa): 0.094
Qiyaasta raadadka (mm): 2140
Min. nadiifinta dhulka (mm): 500
Cabbirka Xajmiga (mm): 41301590
Awoodda seexinta (m): 9.2
Ugu badnaan qodida qoto dheer (mm): 560
Qiyaasaha guud (mm): 688041303640
Nooca: Cummins NTA855-C360
Kacaan la qiimeeyay (rpm): 2000
Awoodda duufaanta (KW): 239
Kabuubyoer of dhululubada-borestroke (mm): 6-139.7152.4
Habka bilawga: Korontada laga bilaabo 24V 11kW
Qaab dhismeedka la joojiyay ee baarka barbaraha: 7
Tirada gawaarida gawaarida (dhinac kasta): 7
Jeexjeex: Waa la kala gooyay
Xiisadda raad raac: Haydarooliga ayaa la hagaajiyay
Raad-raac (mm): 228.6
Qalabka 1st 2nd 3rd
Horay u soco (Km / h) 0-3.6 0-6.6 0-11.5
Dib-u-dhac (Km / h) 0-4.4 0-7.8 0-13.5
Ugu badnaan cadaadiska nidaamka (MPa): 13.7
Soo saarida nidaamka L / min: 335
Gudbinta: Qalabka maareynta, xajmiga dhowr-faleebo, hawo-dhaqameed shaqeynaya, saliid lagu qasbay bamka qalabka, 3 xawaaraha hore iyo 3 xawaaraha gadaal.
Xawaaraha isteerinka: Qoyan, xajin faallooyin badan, Guga la rakibey, haydarooliga dhaqaajiyey.
Biriigga xajin: Qoyan, bareeg bir ah, oo ku shaqeynaya xoojiyaha haydarka iyo isdhexgalka hydraulic.
Wadista kama dambaysta ah: Spur gear, dhimis laba jibbaaran, saliid buufin.
Hore: TY230-3 cagaf
Xiga: SHEHWA-360-DTH gurguurta seperated dusha dusha Haydarooliga hoos-godka qodista mashiinka